Wararkii ugu dambeeyey dagaalka Soomaalida iyo Canfarta ee I... - Axadle Wararka Maanta
Wararkii ugu dambeeyey dagaalka Soomaalida iyo Canfarta ee I…
Muqdisho (Axadle) – Warar kala duwan ayaa kasoo baxaya dagaal u dhexeeyo Soomaalida iyo Canfarta oo maanta dib uga qarxay dalka Itoobiya, kaas oo geystay khasaare kala duwan oo soo kala gaaray labada dhinac.
Dagaalka oo ah mid xoogan ayaa haatan wuxuu ka socdaa duleedka magaalada Garba Ciise oo ku taalla wadada dheer ee isku xirta wadamada Itoobiya iyo Jabuuti.
Wararka ayaa sheegaya in dagaalka uu u dhexeeyo xoolo dhaqato Soomaali ah iyo sidoo kale maleeshiyaad ka soo jeedo dhanka deegaanka Canfarta.
Hantidhowraha Guud ee Qaranka oo soo saaray amar ku socda Raysal…
Guddoomiyaasha Golaha Shacabka iyo Golaha Aqalka Sare oo Maanta kulan…
Ilo dadka deegaanka ah ayaa sheegay in dhawaaqa rasaasta si xoogan looga maqalayo magaalada & agagaarkeeda, waxaana la’isku adeegsanayaa hubka noocyadiisa kala duwan.
Ugu yaraan 10 qof oo labada dhinac ah ayaa ku dhintay dagaalkan oo ay qaadeen Xoolo dhaqatada Soomaalida oo kaashanaya ciidamada dowlad deegaanka, halka ay ku dhaawacmeen tiro kale, sida Axadle u xaqiijiyeen ilo lagu kalsoon yahay.
Dagaalkan ayaa sidoo kale daba socda mid kale oo todobaadkii hore ka dhacay aagga haatan lagu dirirayo, waxaana ku dhintay Soomaali fara badan.
Si kastaba dagaalka labada dhinac ee haatan dib u bilowday ayaa kusoo aadaya, xilli shalay maamulka deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya uu shaaciyey inuu difaaci doono dadka Soomaalida ah ee deggan aagga magaalada Garba Ciise iyo deegaannada kale ee ku dhow.
Abdiwahab Ahmed 2271 posts
The latest on Lionel Messi’s contract talks
Marcus Rashford mural donations to be donated to charity